မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းကြေးနီလူမီနီယံ | induction အပူစက်ထုတ်လုပ်သူ | induction အပူဖြေရှင်းချက်
မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း brazing လူမီနီယမ်
induction လူမီနီယမ် Brazing လုပ်ငန်းစဉ်
induction လူမီနီယံ brazing စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် ပို. ပို. အဖြစ်များဖြစ်လာနေသည်။ ပုံမှန်ဥပမာအနေနဲ့မော်တော်ကား heat exchanger ခန္ဓာကိုယ်မှအမျိုးမျိုးသောပိုက် brazing ဖြစ်ပါတယ်။ လူမီနီယမ်သော induction သုံးပြီးအပူစွမ်းအင်တွေအများကြီးလိုအပ်တယ်နှင့်၎င်း၏အပူစီးကူးကြေးနီနှိုင်းယှဉ် 60% ဖြစ်ပါတယ်။ ကွိုင်ဒီဇိုင်းနှင့်အပူစီးဆင်းရန်အချိန်လူမီနီယမ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအောင်မြင်သောသော induction brazing လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အရေးပါသည်။ နိမ့်သောအပူချိန်လူမီနီယံ braze ပစ္စည်းများအတွက်မကြာမီကတိုးတက်လာထိရောက်စွာလူမီနီယံအသင်းတော်များမြင့်မားအသံအတိုးအကျယ် brazing အတွက်မီးလျှံများနှင့်မီးဖိုအပူအစားထိုးရန်သော induction ခွင့်ပြုခဲ့ပါပြီ။
အလူမီနီအစိတ်အပိုင်းများအောင်မြင်သော induction brazing အစိတ်အပိုင်းများအတွက်အသုံးပြုတဲ့လူမီနီယံအလွိုင်းနှင့် braze အလွိုင်းများအတွက်မှန်ကန်သော flux များအတွက်မှန်ကန်သော braze Filler ပစ္စည်းလိုအပ်သည်။ Braze Filler ထုတ်လုပ်သူမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားဖြစ်လူမီနီယံ braze သတ္တုစပ်နှင့်၎င်းတို့၏သတ္တုစပ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သော flux ပစ္စည်းများရှိသည်။
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား နည်းပညာများ Tags: မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း brazing လူမီနီယမ်, induction လူမီနီယမ် Brazing, RF သော induction လူမီနီယံ brazing